အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ ဆရာငြိမ်းအေးလူ ရဲ့ (၇) ရက်သားသမီးများအတွက် တပတ်စာ ဟောစာတမ်းကြီးလာပါပြီနော် (၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ် ၇ ရက် မှ ၁၃ ရက် အထိ) – XB Media Myanmar
ဒီကာလဟာ တစ်ယောက်ထဲ အထီးကျန်ဆန် နေရတတ်တဲ့ အချိန်ပါပဲ။ အိမ်မှာမနေချင်တာမျိုးနဲ့ လက်ရှိနေရာ ကနေအဝေးထွက်သွားချင်တဲ့ စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပါတယ်။ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြောင့် သောက ပိုရောက်ရ ပါလိမ့်မယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်း စိတ်ခံစားမှုတွေ ပြင်းထန်နေတတ်တဲ့ ကာလပါပဲ။အရမ်း ရင်းနှီးတဲ့သူတွေရဲ့ သစ္စာဖောက်ခြင်း ခံရမည်။ အောက်လက် ငယ်သားတွေကို အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စများ မျက်နှာလွှဲ မခိုင်းသင့်ပါ။လူယုံဒုက္ခပေးမဲ့ အချိန်ပါပဲ။ အလုပ်ထဲမှာ စိတ်နှစ်ထားလို့ မရ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ လုပ်သလောက်လည်း အကျိုးရရှိမှု နည်းနေတတ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးကတော့ ကောင်းနေ တတ်တဲ့ အချိန်ပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်လဲ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် အနားယူသင့်တဲ့ အချိန်ပါပဲ။အချစ်ရေးကတော့ အဆင်ပြေ နေမဲ့ကာလပါပဲ။ ချစ်ရသူကို ဖွင့်ပြောဖို့အတွက် ဒီကာလဟာ အကောင်းဆုံး အချိန်ပါပဲ။အိမ်ထောင်ရေးကံ အထူး ညံ့နေချိန်ပါ။ အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် တာနဲ့ ပြဿနာတတ်ခြင်းစကား အခြေအတင် ပြောရခြင်းတွေ ကြုံရပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးမှာထပ်တလဲလဲ သင်နေတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကြောင့် စိတ်ကုန်နေမိ တတ်ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း ၁/ ၅/ ဝအထူးဟော လုပ်နေကြ အလုပ်တွေ မေ့ထားပြီး သက်သောင့်သက်သာ နေပါ။ ယတြာ ရဟန်းတစ်ပါးအား ထီးလှူပေးပါ။
အဘက်ဘက်က ဖေးမကူညီမှုတွေကြောင့် လိုချင်သော ပန်းတိုင်ကို ရောက်မည်။ လုပ်ငန်းစီးပွား အထူးတိုး တတ်မည်။ဝန်ထမ်းဆို နေရာပေးခံရခြင်း ၊နေရာကောင်းရခြင်းတွေ ရှိလာ ပါလိမ့်မယ်။ ဒီကာလမှာပဲ အခြားသူများအားအကြံပေးခြင်း၊ နှုတ်၏ ဆောင်မခြင်းဖြင့် ထိုသူတွေအဆင်ပြေချောမွေ့မဲ့ ကာလပါပဲ။
မိမိသြဇာ ညောင်းမဲ့ အချိန်ပါ။ ကောင်းသောခရီး ဘာသာရေးနဲ့ သက်ဆိုင်သော ခရီးတွေလဲ သွားရပါလိမ့်မယ်။ခက်ခဲနေမဲ့ ငွေကြေး ကဏ္ဍတွေလည်း ပြေလည်လာမဲ့ အနေအထားမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ ဆုံးပြီလို့ ထင်ထားတဲ့ အကြွေးတွေ ရပါလိမ့်မယ်။လုပ်ငန်း အဆင်ပြေမည်။ အလုပ်ထဲမှာမိတ်ဆွေတွေနဲ့လဲ အတွဲညီညီ လုပ်ကိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။အချစ်ရေးကံ ကောင်းနေပေမဲ့ ချစ်သူရော ကိုယ်ပါ အလုပ်ကိစ္စတွေကြောင့် နှစ်ဦးသားတွေ့ဖို့ အချိန်မပေးနိုင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေး အကောင်းဆုံး ကာလပါပဲ။ အိုးသစ် အိမ်သစ် နေရာသစ်မှာ နေရတတ်တယ်။ အိမ်တွင်းရေး အိမ်ထောင်ရေးကတော့အနည်းငယ် ညံ့နေမဲ့ကာလပါပဲ။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေ သတိရှိပါ။ လင်ယောကျာ်းနဲ့ စကားအခြေအတင် ပြောရကိန်း ရှိပါတယ်။ပညာရေးအနေနဲ့ ကျောင်းပညာ အတန်းပညာထက် ဘာသာရေးနဲ့ နွယ်သောပညာများ ရတတ်ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း ၇ ၊ဝ ၊၆အထူးဟော – ပြောသမျှဖြစ်မည်။ယတြာ – မွေးနေ့တွင် သစ်သီး ၆မျိုး ဘုရားလှူပါ။
လူမှုရေး ပရဟိတကိစ္စတွေကို အားတတ်သရော လုပ်မိနေတတ်ပါတယ်။ စိတ်ကိုလွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ နေချင် နေပြီး အရာရာကိုအကောင်းမြင်နေ တတ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးကတော့ ဟုန်းခနဲမအောင်မြင်ပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်းတိုး တတ်မှာပါ။
အလုပ်စီးပွားက အတိုက်အခိုက်လေးတွေ ရှိပေမဲ့ တိုးတတ်မဲ့သဘော ရှိတယ်။အဆိုးဆုံးက သူများအကြံပေးလို့ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်မိစေနဲ့။ ဒုက္ခတွေ့လိမ့်မယ်။ မိမိဆုံးဖြတ်ချက် ၊မိမိစိတ်ကူးနဲ့သာ အနာဂတ်ကို ပုံဖော်သင့်တဲ့ အချိန်ပါ။ငွေကြေးလာဘ်လာဘလဲ ပေါများနေတတ်တဲ့ အချိန်ပါ။ ငွေအထူးဝင်မယ်။ စပ်တူရှယ်ယာ အလုပ်တွေ ကောင်းမွန်စွာ
တိုးတတ်နေချိန် ပါပဲ။ ကျန်းမာရေး အားနည်းမှုတွေေ လျာ့ပါးသက်သာလာပါပြီ။ နာတာရှည်ဖြစ်နေ သူတောင် ဆေးတိုးသွားမဲ့ အချိန်ပါပဲ။အချစ်ရေးကတော့ စိတ်ကောက်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်ဖြစ် နေမှာပါ။ အိမ်ထောင် ဘက်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ရှုပ်ထွေးမှုလေးတွေစန်းပွင့်နေမှုတွေကြောင့် မိမိဗျာများ ရတတ် တယ်။ ပညာရေးကြောင့် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ငွေဝင်မဲ့ ကံမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဗျာ။
ပညာရေးအတွက် ကျောင်းစတင် အပ်နှံဖို့ အကောင်းဆုံး အချိန်ကာလပါပဲ။အကျိုးပေးဂဏန်း ၇ /ဝ/ ၃ . အထူးဟော ငွေရွှင်မည် ယတြာ ကြံ ရည်တစ်ခွက် ဘုရားကပ်လှူပူဇော်ပါ
ဒီတစ်ပတ်အတွင်း သူများကိစ္စ ကြားဝင် ကူညီခြင်း၊ အာမခံခြင်း တွေကြောင့် အထူးဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်။လင်မယားကြား မိတ်ဆွေတွေကြား ဘယ်သူ့ကြားမှ မဝင်မိပါစေနဲ့။ ဘယ်စီးပွားရေး နယ်ပယ်မှာလဲ အခုကာလမှာ ရတာကနည်းနည်း ၊ပြဿ နာ ရှင်းရတာက များများဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
ရွှေငွေ လက်ဝတ်ရတနာများ ကျပျောက်ခြင်း သူခိုးခိုခံရခြင်းတွေ ကြုံနိုင်တယ်။ အလုပ်မှာ ရန်ပေါ်နိုင်တဲ့ ကာလပါ။လူမျိုးခြား ဘာသာခြားတွေနဲ့ ဆက်ဆံတာ၊ တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးဆို သတိနဲ့လုပ်ပါ။ ထိုသူတွေရဲ့ ဝိုင်းဝန်းချောက်ချခြင်းကို ခံရနိုင်ပါတယ်။ငွေအသုံးဆင်ခြင်ပါ။ ငွေအရမ်း မသုံးမိပါစေနဲ့။ မလိုအပ်တာ တွေဝယ်မိ တတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး အနေနဲ့ကတော့အစား အသောက် ဆင်ခြင်ပါ။
ဆီမသန့်တာတွေ မစားပါနဲ့ ။ အစားမှား ဆေးမှားဆိုတာမျိုး ကြုံရတတ်ပါတယ်။ စက်ပစ္စည်း ဝယ်ဖို့စိတ်ကူး ထားရင် ဒီကာလအတွင်း မဝယ်ပါနဲ့အုံး။စီးပွားတွက်တွက်နေတဲ့ ချစ်သူကြောင့် စိတ်ညစ်ရမယ်။ ချစ်သူကို အချိန်ပေးဖို့ထက် ငွေနောက်ပဲ လိုက်နေပါလိမ့်မယ်။အိမ်ထောင်ရေးကတော့ ထူးထူးခြားခြား သာယာပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးမှာတွက်စာကို မလိုက်နိုင်တာမျိုး ကြုံရပါလိမ့်မယ်။ စာရှင်းပြချိန် သေချာအာရုံစိုက် ထားဖို့တော့ လိုပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း ၂ ၊၄၊ ၆ အထူးဟော ကံညံ့နေသည်။ယတြာ သင်္ဘောသီးဖျော်ရည် တစ်ခွက် ဘုရားကပ်လှူ လိုက်ပါဗျာ။
မိမိလုပ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စရပ် တစ်ခုအပေါ် မနာလိုသူတွေ များနေတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မိမိအမှားကိုစောင့် ဒုက္ခပေးမယ်သူတွေ ရှိပါတယ်။မိမိဘက်က မှန်နေရင်တော့ အရာရာကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စပ်တူလုပ်ငန်းထဲ ငွေရင်းနှီးထားသူများ ဒီကာလကစလို့ အကျိုးအမြတ် စတင် ရရှိပါပြီ။
ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်မဲ့ ကိစ္စများ မိမိဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုတည်းနဲ့ မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။ မသွားချင်တဲ့ နေရာသွားရခြင်း၊ နယ်ပြောင်းခံရခြင်းတွေ ကြုံတွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်လေးများ လက်ဆောင် ရတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးလဲ အနည်းငယ် အားနည်း နေပါတယ်။ နေပူနည်းနည်း မိတာမျိုး၊ အိပ်ရေးပျက်တာမျိုး ကြုံတာနဲ့ ဖျားနာတတ်ပါတယ်။
အချစ်ရေးကံ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင်လဲ စန်း ပွင့်နေတတ်ပါတယ်။ စိတ်ပြေလက် ပျောက် ခရီးထွက်ခြင်း၊ ကလေးတွေကိုပျော်အောင် လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ကံတွေပြန်မြင့်လာပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်ရေး မှာ အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ အနေဝေးဖို့ အကြောင်းဖန် လာလိမ့်မယ်။
မိသားစုနဲ့ ခွဲခွာရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးမှာ မိမိရဲ့ အတွေးသစ် အမြင်သစ်စိတ် ကူးသစ်တွေက အထောက်အကူ ရမှာပါ။ ပညာရေးအတွက်တော့ စိတ်အေးချမ်းရမဲ့ အချိန်ပါပဲ။အကျိုးပေးဂဏန်း ၆/ ၅/ ၂ . အထူးဟော အတိုက်အခိုက် များနေမည်ယတြာ စံပယ်ပန်း ဘုရားလှူပါ
ကံဇာတာ အထူးမြင့်မား နေချိန်ပါပဲ။ ငွေကြေး အဘက်ဘက်က ဝင်လာမဲ့ အချိန်ပါပဲ။ ငွေအရမ်းရွှင်မှာပါ။ငွေကြေးရင်းနှီးမှု လုပ်ငန်းတွေ စတင်ပြုလုပ်ဖို့ ကောင်းပါပြီ။ တစ်ခု သတိထားရမှာက လူများများနဲ့ အုပ်စုဖွဲ့သွား လာခြင်း၊ညဥ့်နက်သန်းခေါင် အပြင်ထွက်ခြင်းကို ဒီကာလအတွင်းလျှော့ပါ။ ပြဿနာက မဖိတ်ခေါ်ဘဲ ရောက်လာတတ်လို့ပါ။
အစုစပ်အလုပ် ၊ရှယ်ယာ အလုပ်တွေ ခဏ ဆိုင်းထားပါအုံး။ အထိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ လူစည်ကား အောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ရပ်ဝေးသွားပြီး ကုန်သွယ်ခြင်းမျိုးက ဒီအချိန်မှာ အရှုံးပေါ်တတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ဒေါင်ဒေါင်မြည်နေ ပါလိမ့်မယ်။နေမကောင်း ဖြစ်နေသူများ ဒီကာလတွင် ဆေးတိုးသွား တတ်ပါတယ်။နာတာရှည် ရောဂါသည်များ ဆရာကောင်း သမားကောင်းတွေ့မည်။
အချစ်ရေးကံ မကောင်းတဲ့ အချိန်ပါ။ မိမိစေတနာက ဝေဒနာ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ မိသားစုအတွက် ပူပန်သောက ရောက်ရတတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် အောက်လက်ငယ်သား သားသမီးတွေကြောင့် စိတ်ညစ်ရတာမျိုးပါ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသား သမီးရှိက ရုတ်တရက်အိမ်ထောင်ကျ တတ်ပါတယ်။ ပညာရေးအတွက် အထောက်အပံ့ကောင်းတွေ အကူအညီကောင်းတွေ ရလာပါလိမ့်မယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း -၃ ၊၆၊ ၂ အထူးဟော -ကံအထူး ကောင်းသည်။ ယတြာ -ရဟန်းသံဃာတွေကို ဆေးလှူဒါန်းပါ။
ခရီးကိစ္စ ပေါ်လာတတ်ပါသည်။ အောက်လူတွေနဲ့ လွှဲထားလို့ မရဘဲ အသေးအမွှားကအစ မိမိကိုယ်တိုင် လုပ်နေရတတ်ပါတယ်။ဗျာများ နေရမည်။ စိတ်ထဲ မတင်မကျ ကိစ္စတွေ ကြုံလာတတ်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ရ ခက်ခဲနေတဲ့ သဘောပါပဲ။အရေးကြီး ကိစ္စတွေကိုလဲ ဒီကာလအတွင်းဆုံးဖြတ်ချက် မချပါနဲ့အုံး။ စီးပွားရေး ချဲ့ထွင်ဖို့ စပ်တူလုပ်ငန်း စတင်ဖို့ အကောင်းဆုံး ကာလပါပဲ။
လခစား ဝန်ထမ်းများ နေရာကောင်းရခြင်း ၊ရာထူးတိုးခြင်းမျိုး ရှိနေလိမ့်မယ်။ လုပ်ငန်းတူအချင်းချင်း အားပြိုင်မှု တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရှိပေမဲ့အဆုံးသတ် မိမိသာ အနိုင်ရမည်။ ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ ထိခိုက်ရှနာ သွေးထွက်သံယို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ထိတွေ့ လုပ်ကိုင်ရသူများ သတိရှိရှိ ကိုင်တွယ်လုပ်ကိုင်ပါ။
အချစ်ရေး ကိစ္စများမှာ မိမိအနေနဲ့ ရွေးချယ်ရ ခက်ခဲတာမျိုး ကြုံရပါ လိမ့်မယ်။ မိသားစုနဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်ကြား ဗျာများရမည် ။အလုပ် အဆင်ပြေနေလို့ အလုပ်ထဲ စိတ်နှစ်မယ် ကြံပြီးခါမှ မိသားစု ပြဿနာတွေကြောင့် အလုပ်ပျက် အကိုင်ပျက် ဖြစ်နေရမည်။
ပညာရေး အခန်း ကဏ္ဍကတော့ အားနည်းနေ ပါတယ်။ ပညာရေးမှာ စာမေးပွဲခန်းရောက်မှ စာတွေ မေ့လွယ်တတ်ပါတယ်။အကျိုးပေးဂဏန်း ၄ /၈ /၂ . အထူးဟော အလုပ်ပို ကိစ္စပိုတွေ များနေ ရတတ်ပါတယ်။ ယတြာ ဗုဒ္ဓဟူးထောင့်မှာ ရွက်လှ ၄ ညွန့် လှူတန်း ပေးပါ။
၇ ရက် သားသမီး အပေါင်း ကောင်းကျိုးလိုအင် ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝကြပါစေ။